संक्रमितको विवरण पारदर्शी होस् - डा. रवीन्द्र पाण्डे | News Polar
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको विवरण दिंदा पारदर्शी नभएको आम जनताको बुझाइ छ । विवरण दिंदा स्थायी ठेगाना भन्नुको कुनै अर्थ छैन । जुन व्यक्ति जहाँ बसेको छ, त्यहि ठाउँको ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्दछ । उदाहरणको लागि काठमाडौंमा ब्यापार गरेको पर्साको व्यक्तिलाई पर्साको विवरणमा किन राख्ने ? काठमाडौं महाबौद्ध बस्ने बर्ष ... को भन्यो भने त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन थप प्रेरित गर्दछ । त्यस्तै काठमाडौंमा ५३ जना भनेर अपुरो सुचना दिंदा आम जनतामा द्विविधा भएको छ ।
सूचनाको हक स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन् । ठेगाना लुकाउँदा वा स्थायी ठेगाना भन्दा आम मानिसमा सरकारले संक्रमितको संख्या लुकाएको भन्ने आशंका व्याप्त छ । अमेरिका, युरोप, भारत लगायत देशले जसरी पारदर्शी ढंगले संक्रमितको संख्या, गम्भीर व्यक्तिको संख्या तथा मृतकको संख्या उल्लेख गरेका छन् , हामीले त्यहि गर्नुपर्छ ।
सरकारले सहि विवरण, पारदर्शी विवरण तथा यथार्थ जानकारी दिने काम गरोस् ।
त्यस्तै आदरणीय पत्रकारहरुले सहि र पुरा समाचार आधिकारिक निकायबाट संकलन गरेर सुचित गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७, १२:३०:३८